လှိုင်သာယာမြို့နယ် အချို့ရပ်ကွက်များအတွင်း မီးအားတရှိန်ထိုး မြင့်တက်ခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လှိုင်သာယာမြို့နယ် အချို့ရပ်ကွက်များအတွင်း မီးအားတရှိန်ထိုး မြင့်တက်ခဲ့
လှိုင်သာယာမြို့နယ် အချို့ရပ်ကွက်များအတွင်း မီးအားတရှိန်ထိုး မြင့်တက်ခဲ့
Posted by etone on Aug 18, 2011 in News, Opinions & Discussion | 15 comments
လွိုင္သာယာတြင္ မီးအားအလြန္ကၽြံ ျမင့္တက္
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ဩဂုတ်လ (၁၆) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်အချို့၌ နေ့လည်ခင်းအချိန်မှစ၍ လျှပ်စစ်မီး ပျက်တောက်လျှက်ရှိပြီး ည (၇)နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင် မီးပြန်လာခဲ့ရာ … အဝင်ဗို့အား ၃၀ဝကျော် ထိ နာဝက်ကျော်ကြာချိန်တိုင်အောင် မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည် …. ။ အဆိုပါ ဗို့အားမြင့်တက်မှူကြောင့် လူနေအိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းအချို့တွင် မီးချောင်းများပျက်ဆီးခြင်း ၊ မီးကြိုးနဲ့ မီးပလပ်ပေါက်များ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်း နှင့် .. အချို့သော လျှပ်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ ပျက်ဆီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည် … ။တချိန်တည်းမီးလာသော အချို့ ရပ်ကွက်များတွင်တော့ မီးအားအလွန်ကျဆင်းလျှက်ရှိပြီး 100ဗို့ထက်ပင် လျှော့နည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည် … ။
အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်မလည်း မီးအားမြင့်တဲ့ ရပ်ကွက်ထဲရောက်နေခဲ့တာပါ … ။ မီးပြန်လာတာနဲ့ .. ဘောင်းခနဲ ပေါက်ကွဲသံနှင့်အတူ ….. ကျွန်မရောက်နေတဲ့ အဆောက်အုံက မီးချောင်း ငါးချောင်းစလုံး ဖျက်ခနဲ လင်းပြီး မှိန်ကျသွားပါတယ် .. … ။ ဝါယာကြိုးတွေက ညှော်နံ့ထွက်လာတာမို့.. အမြန်မိန်းချပြီး ပိတ်လိုက်ရပါတယ် … ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ညှော်နံ့ ကုန်သွားမှ ပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ … နောက်တခါ ဖောက်ခနဲ ရှော့ဖြစ်သံကြားရပြန်တယ် … ။ ဒါနဲ့ ဆက်မဖွင့်ရဲတော့ပဲ မီးဆင်တဲ့လူကို ခေါ်ရပါတော့တယ် ….။
မီးဆင်တဲ့လူက လူငှားများနေတာမို့… မနက်ဖြန်မှ လာနိုင်မယ့်အကြောင်းပြောတော့ ….. ဖယောင်းတိုင်လေး ကိုယ်စီ ကိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရပြန်တာပေါ့ … ။ ကြိုးတွေ ကောင်းမကောင်း မစစ်ရသေးတာမို့ … ဘယ်သူမှ မီးလင်းဖို့ကိစ္စ ထမကိုင်ရဲကြပါဘူး …။ ဒါနဲ့ပဲ ..ကျမတို့နှစ်ယောက်သား အလုပ်ပိတ်ပြီး …အိမ်ပြန်လစ်လာကြတယ် … ။ နောက်နေ့ရောက်တော့ … မီးသမားက အတော်နဲ့မလာပါဘူး … မှောင်မှလာပြီး စစ်တော့ … မီးချောင်း ချုပ်ကြွသွားပါတယ်တဲ့… ဒီတော့ …ဝယ်ထည့်ရတော့တာပဲ …… အလကားနေရင်း ကိုယ့်ပယောဂမပါဘူး … ဗို့အားမြင့်လျှပ်စစ်မီးကြောင့် ပိုက်ဆံကုန်ရတာ စိတ်တိုဖို့ကောင်းပါတယ် … ။ တချို့ အိမ်တွေဆို တီဗွီတွေ ကြွသွားတယ်တဲ့… ဒီဗွီဒီစက်တွေလည်း ကြွတယ်… ကြားရတာတော့… အစုံပါပဲ … ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဓါတ်အားပေးတဲ့ ကိစ္စ ဘယ်သူတွေကတာဝန်ယူပြီး ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်လည်း မသိပေမဲ့ … ဒီမှာတော့ … မီးလာချင်လာမယ်… မလာချင်မလာဘူး … အားနည်းချင်နည်းမယ် .. .များချင်များမယ် .. အပျက်ဆီးရှိလည်း .. ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင် ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ စိတ်ညစ်ရတာတော့အမှန်ပါပဲ … ။ မီတာသုံးစွဲ ဆောင်နေတဲ့ လူတွေကို respect လေးတော့ ပေးပြီး responsible တော့ဖြစ်သင့်တာပေါ့ … ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ပုဂ္ဂလိက ပေးတယ် ထင်ပါတယ် … ပြီးတော့… မီးပျက်တဲ့အပေါ် အလျှော်စားလည်း ရှိမယ် ထင်ပါတယ် …. သိတဲ့လူများ ဝင်ဆွေးနွေးပါဦးနော် … ။
ဟုတ်တယ် etone မမ ရေ မီတာဖတ်သမားတွေဆို သူတို့ဖတ်ချင်သလောက်ဖတ်ပြီးတောင်းချင်သလောက်
တောင်းနေတာ ။ အိမ်စစပြောင်းချင်းတုန်းကဆို မီတာခ အရမ်းများတော့ ပထမတော့ ကိုယ်သုံးလို့ပဲများတယ် ထင်တာ ။ နောက်မှ သူတို့က တောင်းချင်သလိုတောင်းနေတာ ။ အမေ က ရုံးကိုသွားပြောတော့မှ နောက်လတွေ နဲနဲလျော့သွားတယ်….
မလေးရှားမှာတော့မီးမပျက်တတ်ပါဘူး။ မီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကြိုပြောပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၁ဝနှစ်လောက်တုန်းကမီး၃ရက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအလုပ်ပြုတ်သွားပါတယ်။ အဲဒီ
အဲယ်….ဒီမှာပိုတောင် အဆင့်မြင့်သေးတယ် ကိုယ့်အိမ်က ကိုယ့်မီးတာဘုံးကို လက်နဲ့တောင် ထိစရာမလိုဘူး ….သူတို့က ဘယ်နေရာကနေလှမ်းပြီးတော့ ထိန်းပေးလဲမသိဘူး တစ်လကို ထိန်းသိမ်းခ ၅၀ဝ ကိုတော့ လတိုင်းပေးနေရတယ်လေ……
အမလေးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီးပျက်တိုင်းသာ အလုပ်ဖြုတ်ခံရရင် အလုပ်သမားတောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူး…
မနေ့ညကတော့ ကျွန်မတို့လမ်းရဲ့ဟိုဘက်လမ်းတော့ လမ်းထိပ်မှာ ရှော့ခ်ဖြစ်သွားလေရဲ့
အဲ ဒီလောက်ထိအောင် ဗို ့အားတက်ရင် ဝါယာရှော့ကနေ မီးလောင်တတ်တယ်နော်။သတိထားကြပါ။မိန်းချထားရမယ် အဲလောက်ဆောင့်တက်နေရင်
နွယ်ပင်တို့ လမ်းထိပ်က ထရန်စဖာမာကြိးဆို ခဏခဏပေါက်သလားမမေးနဲ့
အခုဆို ခဏခဏပေါက်တာ အကြိမ်ရေတောင်ပိုစိပ်လာသလား ထင်ရတယ်
တစ်ခါတစ်လေဆို ဘေးနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိတောင် မီးတွေစင်လာလို့
ထိုင်နေတဲ့ သူတွေတောင် ထပြေးရတဲ့ အထိပဲ ။ အဲလို ပေါက်လို့ မီးသမားကိုခေါ်ရင်လဲ
အလကားမဘူးနော် RK လေးနဲ့မှ ဒီလို ပေါက်တာလဲ တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး (2) ခေါက်လောက်
ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေများ အဲလို ခဏခဏပေါက်အောင် မခံတဲ့ မီးကြိုးများ တပ်ပေးခဲ့သလားတွေးမိတယ် ။
အဲဒီလို ဖြစ်ရင် လွှတ်တော်အမတ်ကို တိုင်ကြားလေ။ သဂျီးသင်ထားတာ မှတ်ထားမှပေ့ါ။
ရွာထဲမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုရင်တော့ ရွာတွင်း အမတ်တွေကို စုရုံးခိုင်းလိုက်.. အမတ်တွေ စုထားခိုင်းပြီးတော့ အလဲတွေ ရှောင်နေခိုင်းလိုက်.. လဲ နေတာ မမြင်ချင်လို့..
ကျွန်တော်အိမ်မှာ မူးစုမတ်စု စုပြီးဝယ်ထား တဲ့
တီဗွီတစ်လုံး အောက်စက်တစ်လုံးနဲ ့မီအားမြှင့်စက်တစ်လုံး
မြန်မာနိုင်ငံ လျှပ်စ်စွမ်းအားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အကုန်းလုံးမာလကီးယားသွားလေရဲ့
အေးလေ သူတိုတွေက မီးအားနဲနဲလေးပေးနေကျဆိုတော့
ဟိုဘက်ကမ်း က မီးထိန်ထိန်
ဒီဘက်ကမ်း က မီးထိန်ထိန်
မအီးတုန်း တို ့အိမ်
လျှပ်စစ်မီး အကြောင်းတွေဖတ်ရရင် စိတ်နာတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ သံတွဲမြို့မှာ ဖိုးသီးချို ကုမ္ပဏီ က လျှပ်စစ်
မီးပေးနေတာ ၂၄ နာရီပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ လျှပ်စစ်မီးမပေးခင်က ပထမ လ စမ်းပေး
ကြည့်ပါမယ်တဲ့၊ နောက်လတွေမှာ ဈေးလျော့ပေးပါ့မယ်တဲ့၊
ခုတော့လဲ တစ်စိမ်းတွေလို ဖြစ်နေပီလေ၊ စားပီးနားမလည်လုပ်နေကြပြီလေ၊ မိတ်ဆွေတို့တွက်ကြည့်ပေး
ကြည့်ပါ၊ လျှပ်စစ်မီးပေးတဲ့စက်တွေက တစ်နာရီ ဒီဇယ် ၁ဝ ဂါလန် စားသတဲ့၊ တစ်လ မြို့က သုံးတဲ့ယူနစ်
( ကောက်ခံရတဲ့ယူနစ်) ၇၅၀၀ဝ ရသတဲ့၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ပြောတာပါ၊
ဈေးနှုန်းကတော့လျှော့ပါတယ်၊ စပေး တဲ့လ က တစ်ယူနစ် ၅၀ဝ ပါ၊ ခု ၂ဝ လျှော့တော့ တစ်ယူနစ်ကို၄၈၀
ပေးနေရပါတယ်၊ ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလံကို ၃၀၀ဝ ( အစိုးရဈေး) နဲ့လဲမောင်းနေကြတာပါ၊
ပီးတော့ လမ်းမီးဝန်ဆောင်မှု လဲ အရမ်းအားနည်းနေပါတယ်၊ မြို့တွင်း နေရာတော်တော်များများမှာလည်း
လမ်းမီးတွေ မထွန်းပေးလို့ မဲမှောင်နေပါတယ်၊ တစ်ယူနစ်ကို ၄၈ဝ ပေးဆောင်နေကြရလို့ အဆင်မပြေ
ကြပါဘူးဗျာ။ အလကားလူတွေပါပဲ၊ ဂတိမတည်ဘူး။
ဟွန်း… မီတာခကလည်း ဈေးကြီးလိုက်တာ … တယူနစ်ကို 480တဲ့လား .. အစပေါင်းများစွာ ဈေးကြီးတယ်နော်
မီးအားက လုံးဝကို မမှန်တာပါ.. တက်ရင် တစ်ဟုတ်ထိုးတက်ပီး ကျတော့လည်း တစ်ဟုန်တိုး ကြတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့ ဒဂုံမှာဆိုရင် ၁ဝ ကျော်ရင် တက်ပီ ၂၂ဝ ကျော် ..
မီးအားကို အဲ့ဒါမျိုး တက်ရင် အရမ်းတက် … ကျလျှင် အရမ်းကျ ဖြစ်နေတာ ဘယ်သူ့မှာများ တာဝန်ရှိလည်း မသိဘူး … တကယ်ပါပဲ … ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကို မသိဘူး .. သူတို့ တက်တာ ကျတာ အရေးမကြီးဘူး … ပစ္စည်းတွေပျက်ကုန်တာက ကိုယ်ခံရကိန်း